အခက်မသင့်ရင် အသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်နို်င်တဲ့ တည်သီး ⋆ The Moon
by A K in ကျန်းမာ​ရေး, ဗဟုသုတ
တည်သီးကို ၃နှစ်အောက်ကလေးများ မကျွှေးသင့်မြန်မာအခေါ်”တည်သီး”ကို ၃နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို လုံးဝမကျွေးသင့်ပါဘူး။အဆင်မသင့်ရင် အသက်ပါဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်နို်င်တဲ့ သာဓကတွေကို အောက်က Link ထဲမှာအကြောင်းစုံရေးသားဖော်ပြထားကြောင်းဘာသာပြန် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။”တည်သီး”ဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက်အစာအိမ်မှာ ကျောက်တည်စေနိုင်ပြီးရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်မကိုက်ညီချိန်တွင်စားသုံးမိပါက ကလေးငယ်မှအသက်ရှု မဝဖြစ်ကာ ….
ကိုယ်ခံအားမကောင်းချိန်တွင် သတိမေ့မျှောခြင်း သတိပြန်မလည် လာသည် အထိ ဖြစ်စေ၍အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း သတိပေးရေးသားထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ငယ်ရွှယ်တဲ့ ၃ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေ ရဲ့အတွင်းကလီဇာ ခံနိုင်ရည်အားနှင့်ကလေး၏ အစားအသောက် အမျိုးမျိုးကိုသတိပြုရှောင်ကျဉ်၍ အဟာရနှင့် ကိုက်ညီသောအစားအစာများကို ရွှေးချယ်ကျွေးတတ်ဖို့သည်မိဘတိုင်း၏ အရေးကြီးသော အချက်ဖြစ်သည်။
နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်မှာတော့ ကလေးဖြစ်စေ/လူကြီးဖြစ်စေ တည်သီးစားပြီးနွားနို့/ပင်လယ်အစားအစာ ဟူသမျှကို(အထူးသဖြင့်ဂဏန်း )/စိမ်းစားဥ/ပဲနို့ ရည်နှင့် ပဲပြားစသဖြင့်စားခဲ့မိလျှင် ဝမ်းထဲကကလီစာတွေပျက်စီးတတ်ကြောင်း အောက်က Link မှာ သတိပေးတားမြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ဤPostကို ဖတ်ခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးထက် တစ်ချို့ တည်သီးရောင်းချ၍ စီးပွားရေးဆန်သူတချို့မှာ ဈေးကွက်အရ ဝေဖန်စရာဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုရင်းမှာ ရည်ညွှန်းခေါင်းစဉ်မှာ ၃နှစ်အောက် ကလေးငယ်များကို အဓိက ကျန်းမာရေးအတွက် သတိပြုဖော်ပြ ထားသည်။တည်သီးတွင် စိုးကျိုးများရှိသလိုကောင်းကျိုးများလည်းရှိ၍ မဆင်မချင်စားသုံးလျှင် သင့်တင့်မှု့မရှိသောအစားအစာနှင့် တွဲဖက်၍ စားမိလျှင်….ဘေးအန္တရာယ် ကိစ္စရပ်များစွာရှိ၍ ငယ်ရွှယ်သည့် ကလေးငယ်များအား အဓိကဦးစားပေး သတိပြု ဆင်ချင်သင့်ကြောင်း ရည်ညွှန်းပြောဆိုပါသည်။မိမိကလေးငယ်ကို စားဖူးတယ်ရှိအောင်/သူစားတတ်မလားမသိဘူး ဆိုပြီး စမ်းကျွေးမိတာမျိုး ရှိတတ်လို့ သတိပြုရန် ကျန်းမာရေးအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်
တညျသီးကို ၃နှဈအောကျကလေးမြား မကြှေးသငျ့မွနျမာအချေါ”တညျသီး”ကို ၃နှဈအောကျကလေးငယျတှကေို လုံးဝမကြှေးသငျ့ပါဘူး။အဆငျမသငျ့ရငျ အသကျပါဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖွဈနိုငျတဲ့ သာဓကတှကေို အောကျက Link ထဲမှာအကွောငျးစုံရေးသားဖျောပွထားကွောငျးဘာသာပွနျ မြှဝလေိုကျပါတယျ။”တညျသီး”ဟာ ကလေးငယျတှအေတှကျအစာအိမျမှာ ကြောကျတညျစနေိုငျပွီးရာသီဥတုအခွအေနနှေငျ့မကိုကျညီခြိနျတှငျစားသုံးမိပါက ကလေးငယျမှအသကျရှု မဝဖွဈကာ ….
ကိုယျခံအားမကောငျးခြိနျတှငျ သတိမမြေှ့ောခွငျး သတိပွနျမလညျ လာသညျ အထိ ဖွဈစေ၍အသကျပါဆုံးရှုံးနိုငျကွောငျး သတိပေးရေးသားထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ငယျရှယျတဲ့ ၃ နှဈအောကျ ကလေးငယျတှေ ရဲ့အတှငျးကလီဇာ ခံနိုငျရညျအားနှငျ့ကလေး၏ အစားအသောကျ အမြိုးမြိုးကိုသတိပွုရှောငျကဉျြ၍ အဟာရနှငျ့ ကိုကျညီသောအစားအစာမြားကို ရှေးခယျြကြှေးတတျဖို့သညျမိဘတိုငျး၏ အရေးကွီးသော အခကျြဖွဈသညျ။
နောကျအရေးကွီးတဲ့အခကျြမှာတော့ ကလေးဖွဈစေ/လူကွီးဖွဈစေ တညျသီးစားပွီးနှားနို့/ပငျလယျအစားအစာ ဟူသမြှကို(အထူးသဖွငျ့ဂဏနျး )/စိမျးစားဥ/ပဲနို့ရညျနှငျ့ပဲပွားစသဖွငျ့စားခဲ့မိလြှငျ ဝမျးထဲကကလီစာတှပေကျြစီးတတျကွောငျး အောကျက Link မှာ သတိပေးတားမွဈ ဖျောပွထားပါတယျ။ဤPostကို ဖတျခွငျးဖွငျ့ ကနျြးမာရေးထကျ တဈခြို့ တညျသီးရောငျးခြ၍ စီးပှားရေးဆနျသူတခြို့မှာ ဈေးကှကျအရ ဝဖေနျစရာဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဆိုလိုရငျးမှာ ရညျညှနျးခေါငျးစဉျမှာ ၃နှဈအောကျ ကလေးငယျမြားကို အဓိက ကနျြးမာရေးအတှကျ သတိပွုဖျောပွ ထားသညျ။တညျသီးတှငျ စိုးကြိုးမြားရှိသလိုကောငျးကြိုးမြားလညျးရှိ၍ မဆငျမခငျြစားသုံးလြှငျ သငျ့တငျ့မှု့မရှိသောအစားအစာနှငျ့ တှဲဖကျ၍ စားမိလြှငျ….ဘေးအန်တရာယျ ကိစ်စရပျမြားစှာရှိ၍ ငယျရှယျသညျ့ ကလေးငယျမြားအား အဓိကဦးစားပေး သတိပွု ဆငျခငျြသငျ့ကွောငျး ရညျညှနျးပွောဆိုပါသညျ။မိမိကလေးငယျကို စားဖူးတယျရှိအောငျ/သူစားတတျမလားမသိဘူး ဆိုပွီး စမျးကြှေးမိတာမြိုး ရှိတတျလို့ သတိပွုရနျ ကနျြးမာရေးအတှကျ မြှဝလေိုကျပါတယျ
သူများနဲ့မတူ ဆံပင်အုံထူပြီးကောင်းလွန်တဲ့ ကလေးမလေး၊ Pantene နဲ့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့
၀မ်းချုပ်ခြင်းမှ ရာသက်ပန် ကင်းဝေးစေဖို့